indawo entle, i-suite 3 indawo yokuhlala ekhethekileyo - I-Airbnb
indawo entle, i-suite 3 indawo yokuhlala ekhethekileyo
sikwinkqubo yokutshintsha isakhiwo esidala sendlu yesikolo, esibonisa kakuhle iindawo ezisemaphandleni, i-windmill njl njl. sigqibezele i-1 enamagumbi ayi-3 ezindlu zeholide ezakhiwe ngamaplanga - undwendwe lusebenzisa ibala langaphakathi kunye neegadi. Igumbi ngalinye linekhitshi elincinci elahlukileyo negumbi lokuhlambela, indawo yokupaka esimahla. Indlu yesikolo ingaphandle kwedolophu, uhamba imizuzu eyi-10 kwiibhari nakwiivenkile.
i-portaferry yidolophu emangalisayo kwi-peninsula, ikwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo - ukufikelela lula kwi-Castle ward (umdlalo we-thrones) nge-Strangford ferry. I-Exploreis Aquarium, iPortico Arts Venue, iEchlinville Distillery kunye neebhari ezintle zonke zifumaneka nje ngeenyawo kwiindlela ezikhanyisayo ukuya edolophini. Ulwandle oluhle kunye nokuhambahamba kufikeleleka lula kwaye ukutya okumnandi kokubini ePortaferry naseStrangfordwe kudla ngokubakho kuyo nayiphi na imibuzo edla ngokubakho kwisayithi, amagumbi akho abucala. siya kukuvuyela ukucebisa ngezinto ezinomtsalane zasekuhlaleni, iivenkile zokutyela njl
i-portaferry yidolophu emangalisayo kwi-peninsula, ikwindawo yobuhle bendalo obubalaseleyo - ukufikelela lula kwi-Castle ward (umdlalo we-thrones) nge-Strangford ferry. I-Exploreis…